अफगानी सैन्य विमान कसले खसाल्यो ? यस्तो छ रहस्य — Imandarmedia.com
अफगानी सैन्य विमान कसले खसाल्यो ? यस्तो छ रहस्य
एजेन्सी। उज्बेकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गरेको एउटा अफगान सैन्य विमानलाई हवाई प्रतिरक्षा बलले खसालिदिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार उक्त विमानले गैरकानुनी रूपमा उक्त मध्यएशियाली राष्ट्रको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको थियो।
उक्त विमानमा कति जना सवार थिए वा कोही जीवित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उनले खुलाएनन्। अफगानिस्तानको सीमामा रहेको दक्षिणी प्रान्त सुखन्दारियोका एक चिकित्सकले समाचारसंस्था एएफपीलाई अफगान सेनाको पोसाक लगाएका दुई बिरामी आइतवार साँझ भर्ना गरिएको बताएका छन्। तीमध्ये एक जनासँग प्याराशुट रहेको र उनको हाड भाँच्चिएको जानकारी ती चिकित्सकले दिए।
आइतवार उज्बेकिस्तानका निकायहरूले सीमा पार गरेका कारण ८४ अफगान सैन्य अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको जनाएका छन्।अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानले नियन्त्रणमा लिएसँगै त्यहाँ अस्थिरता बढेको बताइएको छ। मुख्य सहरहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिबान लडाकुहरू आइतवार राजधानी काबुल प्रवेश गरेका थिए।
उनीहरूले सोही दिन राष्ट्रपति भवनलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी तथा अन्य केही वरिष्ठ अधिकारीहरू देश छोडेर अन्यत्र पलायन भएपछि त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
अफगानिस्तान छोड्ने प्रयास :
तालिबान नेतृत्वले आफ्ना लडाकुहरूलाई अफगान नागरिकहरूलाई केही नगर्न फेरि निर्देशन दिएको छ। आइतवार दोहास्थित तालिबान वार्ता टोलीका एक सदस्यले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अफगान जनतासँग “प्रतिशोध” नलिने बताएका थिए। “हामी अफगान जनता विशेषतः काबुलवासीलाई उनीहरूको सम्पत्ति र जीवन सुरक्षित छ, कसैसँग पनि प्रतिशोध लिइनेछैन भनेर विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ,” बीबीसीका याल्दा हकिमसँग सुहैल शाहीनले भनेका थिए।
द न्युयोर्क टाइम्स समाचार पत्रका अनुसार सन् २००१ यता अमेरिकाले अफगान सुरक्षाकर्मीको तालिम, हतियार र अन्य सामग्रीमा ८३ अर्ब डलर खर्चेको थियो। अमेरिकीहरूलाई सधैँ अफगानिस्तानमा लड्न सकिन्न बरू यहाँकै सुरक्षाकर्मीलाई बलियो बनाए काबुलमा प्रजातान्त्रिक सरकार बनिरहन्छ भन्ने लागेको थियो। राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनको मुख्य रणनीति नै अफगान सुरक्षाकर्मीलाई बलियो बनाएर जतिसक्दो चाँडो आफूहरू फर्किने भन्ने थियो।
युद्ध लड्न र जित्न तालिम र हतियारले मात्र सकिँदो रहेनछ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी सैनिक फर्किने घोषणा गर्नुअघि नै तालिबानहरूले अफगानिस्तानमा आक्रमण तीव्र पारेका थिए।
ग्रामीण क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरू धमाधम तालिबान लडाकुलाई हतियार बुझाउँदै आत्मसमर्पण गर्दै ज्यान जोगाउन लागे। कतिपय ठाउँमा त तालिबानहरूले उनीहरूलाई घर फर्कन गाडी भाडासमेत दिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। यसरी गाउँका सुरक्षा पोष्ट कब्जा गरेका तालिबानहरूले दोस्रो निशाना जिल्लालाई बनाए। दुर्गमका जिल्लाहरू तालिबानले धमाधम कब्जा गर्न थाले। सबैतिरका सुरक्षाकर्मीको एउटै गुनासो हुन्थ्यो- काबुलबाट हवाई सहयोग छैन, खाद्यान्न र अन्य सामग्री पनि सकिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानबाट फर्किने घोषणा गरेसँगै तालिबानहरूले आक्रमणलाई तीव्र पारे तर अफगान सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रपति असरफ घानीका लागि आफ्नो ज्यान बाजी राख्नु जरूरी ठानेनन्। सुरक्षा फौजभित्र व्यापक भ्रष्टाचार थियो। किताबमा झन्डै ३ लाख सुरक्षाकर्मी भएको रेकर्ड थियो तर मैदानमा त्यति संख्या कहिल्यै पुगेन। विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा सिपाहीदेखि उच्च सैनिक अधिकारीहरू निराशा र तिरष्कृत भएको भाव व्यक्त गरिरहेका थिए।
गत साता तालिबानहरूले आक्रमण गरेको दक्षिणी सहर कान्दहरको एउटा प्रहरी चौकीभित्र आलुमात्र भेटिएको थियो। हप्तौंदेखि उक्त चौकीमा दैनिक रासनको रूपमा आलुमात्र सप्लाई हुँदै आएको रहेछ। आलुमात्र खाएर बाँचेको ज्यानले तालिबानसँग कसरी लड्नु, किन लड्नु!
‘यी फ्रेन्च फ्राईले मात्र अग्रपंक्तिलाई जोगाइराख्न सक्दैनन्,’ आलुमात्र रासनको रूपमा आएपछि कान्दहरका एक प्रहरी अधिकारीले भनेका थिए। कान्दहरको अर्को सुरक्षा पोष्टमा रहेका प्रहरी अधिकारी अब्दुल हलिमले आफूहरू भ्रष्टाचारमा डुब्न थालेको बताएका थिए। उनको पोष्टमा ३० जनाको दरबन्दी थियो तर मान्छे १५ जनामात्रै थिए। उनीहरू पनि गाउँ तालिबानले कब्जा गरेकाले मात्रै चौकीमा बसेका थिए।
‘यति थोरै हतियारले हामी कसरी तालिबानलाई हराउन सक्छौं? उनीहरूसँग मेसिन गन छन् तर हामीसँग मेसिन गनमा लाग्ने गोली थोरै छन्,’ अब्दुलले भनेका थिए। गाउँ र जिल्लामा तालिबानलाई रोक्न नसकेपछि अफगान सुरक्षा फौजले ३४ वटा प्रान्तीय राजधानी जोगाउने रणनीति लिएका थिए। जब तालिबानहरूले एकपछि अर्को सहर कब्जा गर्न थाले त्यो रणनीति पनि असफल भयो।
सन् २००१ यता झन्डै ६० हजार अफगान सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। यत्रो ठूलो क्षति हुनुका पछाडि तालिबानभन्दा पनि सरकारकै कमजोर रणनीति कारक रहेको धेरै सुरक्षाकर्मीलाई लाग्छ।
जनरल तावाकोलीले भनेको त्यो मनोवैज्ञानिक लडाइँ विभिन्न तहमा जारी थियो। सैनिक जहाजका पाइलट भन्थे- तालिबानविरूद्ध लड्न जाँदा सरकारलाई जहाजमा बसेका सैनिकभन्दा पनि जहाजमा केही हुने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ।
तालिबान समूहले अफगानिस्तान र पाकिस्तान जोडिएका पाश्तुन क्षेत्रहरूमा सत्तामा आएपछि शान्ति-सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने र शरिया कानुन लागु गर्ने वाचागर्यो । तालिबानले दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तानबाट छिट्टै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो। सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा उनीहरूले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्तमाथि कब्जा गरे।
त्यसको ठिक एक वर्षपछि उनीहरूले राजधानी काबुलमा नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रपति बुर्हानुद्दीन रब्बानीको सरकारलाई सत्ताच्युत गरे। उनी सोभियत सङ्घको अतिक्रमणको विरोधमा अफगान मुजाहिदीन अर्थात्‌ “विधर्मीहरूसँग लड्ने योद्धाहरू” तयार पार्ने संस्थापकमध्ये एक थिए।
तालिबानका कैयौँ वरिष्ठ नेताले पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा आश्रय लिए जहाँबाट उनीहरूले सो समूहलाई मार्गनिर्देशित गरे। तर “क्वेटा शुरा” को अस्तित्वलाई इस्लामाबादले अस्वीकार गर्‍यो।
फेब्रुअरी २०२० को अमेरिका-तालिबान शान्ति सम्झौतापश्चात्‌ तालिबान समूहले आक्रमणको रणनीति फेरेको देखिन्छ। उनीहरूले सहर तथा सैनिक संरचनाहरूमा जटिल आक्रमण गर्नुभन्दा लक्षित हमला गर्न थालेको देखिन्छ जसले सर्वसाधारण नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको छ।लडाकुहरूले पत्रकार, न्यायाधीश, शान्ति अभियानकर्मी र शक्तिमा रहेका महिलालाई निसाना बनाउने गरेका छन्।